Lalampihariana lavanila: Zary sehatra fikotrehana kolikoly ny fanomezana “Agrément d'exportateur de vanille”
jeudi, 10 octobre 2019 20:35
Fitaintainana hatrany no mahazo ny mpandraharaha isan-taona amin’ny fotoana fanaovana ny fangatahana ahazoana « Agrément d'exportateur de vanille » satria na mahafeno fepetra tahaky ny inona aza, mety tsy ahazo, ary tsy azo ivalozana ny lisitra avoakan'ny ministera.
Didim-pitondrana iraisan’ny ministera (Arrêté interministériel) no mitanisa ireo fepetra rehetra takiana amin'ny fahazoana ny « Agrément d'exportateur de vanille » ary tena mazava ireo fepetra ireo ka tokony na mahatanteraka azy rehetra ka mahazo, na misy tsy tanteraka ka tokony tsy ahazo.
Hatramin'izay ho efatra taona nisiany izay anefa dia zary fitaovana ampiasain'ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministeran'ny varotra hitakiana vola amin'ny mpandraharaha ny fanomezana azy io, fa tena mibaribary fa tsy manaraka velively ireo fepetra takian'ny « Arrêté interministériel » namoronana azy. Betsaka ny mahafeno ilay fepetra nefa tsy mahazo, ary hita anefa fa maro no hita mibaribary tsy mahafeno fepetra nefa mahazo.
Tsy hay, iza no mandinika sy mamoaka ny lisitra: ny minisitra ve ? Ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny minisitra ve? Vaomiera ve? Iza avy, ary amin'ny alalan'ny inona no mahavoatendry ao anatin'ny vaomiera? Ny zava-misy dia nivoaka izao ny lisitr’ireo nahazo « Agrément d'exportateur de vanille » ho an'ny taona 2019-2020.
Amin'ireo 130 eo ho eo nahazo tamin'ny 2018-2019 dia 76 fotsiny no navaozina, fa ny ambiny rehetra nofoanana, ary mihoatry ny 30 ny mpangataka vaovao nahazo.
Amin'ireo nofoanana dia maro ireo sady nahafeno ny fepetra rehetra voafaritra ao amin’ilay « Arrêté interministériel » no sady nanao fampiasam-bola goavana ho fanomanana ny taom-piotazana lavanila 2019, fa indrindra, efa nandray vola mialoha (avance sur commande) avy amin'ny mpanafatra lavanila any ivelany.
Tsy misy fanazavàna ny momba ny tsy nahatafiditra azy anaty lisitra, ary tsy misy fitsimbinana amin'izay mety ho vokatry ny tsy nanavaozana ny « Agrément d'exportateur de vanille ».
Amin'ireo vao sambany nahazo « Agrément d'exportateur de vanille » anefa dia tsy manana fotodrafitrasa sy fitaovana farafahakeliny ho amin’ny fanangonana lavanila akory, misy aza mbola mpianatra any amin'ny oniversite, na koa olona vahiny mandalo mitoetra amina hotely, dia any amin’ny hotely no mividy lavanila.
Sady mifanohitra amin'izay dradradradraina ho politikam-panjakàna fampiroboroboana ny asa fihariana lavanila, no mifanohitra amin'ny politika fampiroboroboana ny toekarem-pirenena ny zava-misy, hoy ireo matihanina amin’ity sehatra ity. Fa ny tena loza, hoy hatrany ireto farany, dia zary sehatra fikotrehana asa fanaovana kolikoly avo lenta ny fanomezana “Agrément d'exportateur de vanille” ka anairan’izy ireo ny mpitondra ambony sy ireo Birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly mba hanarenana izao toe-javatra izao fa tena tsy rariny.
Hanomboka amin’ny 15 oktobra 2019 ny famerenana ny volan’ny banky notrosain’ireo orinasa nanomanana ny taom-piotazana lavanila, ka hisedra fahasahiranana ireo orinasa ireo raha mikatona, ary olona 1 000 eo no ho very asa avy hatrany.
Mananara Nord: Tsara ny vokatra lavanila fa tsy mahita lalana ny mpamboly
Fiompiana tantely: Tonga mizara traikefa aty Menabe ry zareo Kenyana »